के यी नेताहरुले ओली समक्ष आत्ममसर्पण गरेकै हुन्?योगेश भट्टराईले गरे यस्तो खुलासा – Classic Khabar
के यी नेताहरुले ओली समक्ष आत्ममसर्पण गरेकै हुन्?योगेश भट्टराईले गरे यस्तो खुलासा
August 23, 2021 71
लामो समय माधव नेपालको पक्षमा रहेका नेताहरुले अब एमालेमा तेस्रो धार जन्माउन सक्ने आँकलन गरेकै बेला अचानक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंगै रहने संकेत देखिएको छ । सोमवार गरिएको निर्णायक वार्तापछि सचिव योगेश भट्टराईले यस्तै संकेत गरेका छन् । उनले अध्यक्ष ओली निकै सकारात्मक देखिएको मात्र भनेनन् माधव नेपालको साथमा रहेकाहरुलाई पनि फर्कन आग्रह गरे ।
उपाध्यक्ष भीम रावलसहितका नेताहरु निर्णायक वार्ता भन्दै सोमवार ओलीसंग भेटघाट गर्न बालकोट पुगेका थिए । बैठकमा महासचिव इश्वर पोखरेल पनि सहभागी भएको बताइएको छ ।
बालकोटमा भएको वार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै भट्टराईले सबै नेता कार्यकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने र सबैका पुराना जिम्मेवारी यथावत राख्ने प्रतिबद्धतासमेत अध्यक्ष ओलीले व्यक्त गरेको जानकारी दिए ।
भट्टराईले भने, ‘अध्यक्ष कमरेडले अत्यन्तै सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन जिम्मेवार छु भन्नुभएको छ । कसैप्रति भेदभाव र अन्याय हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता अब स्थायी कमिटी बैठकले गर्छ गर्नुभएको छ ।
अब सबै साथीहरूलाई विभाजनको पक्षमा नलागी एकतामा लाग्न आह्वान गर्छु ।’ भट्टराईले माधव नेपाल दल दर्ताबाट एमाले एकतामै फर्किए कारवाही फिर्ता हुने समेत जानकारी दिए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भित्री सम्झौता गरेर उनीहरुले आत्मसमर्पण गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
ओलीले २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पदाधिकारीका रुपमा रहन भनेपछि उपाध्यक्षहरु भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरु गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्यलगायतले एमालेमै रहने निर्णयमा पुगेका हुन् । जेठ २ अघिको अवस्थामा जो जुन पदमा थियो त्यो पद यथावत रहने कुरामा ओली सहमत भएको बताइएको छ । यो समूह विगतमा माधव नेपालको साथमा रहँदै आएको थियो । नेपालले एमाले विभाजन गरेपनि उनीहरुले साथ दिएका थिएनन् ।
अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पनि रावलसहितका नेताहरु सहभागी हुने भएका छन् । ९ भदौमा एमालेको विभाजनबारे निर्वाचन आयोगले हस्ताक्षर सनाखत गर्नु अघि विगतमा माधव नेपाल पक्षमा रहेर फुटेको पार्टीमा नगएका नेताहरुले कित्ता अझ स्पष्ट पारेका हुन् । उनीहरुले अब एमाले नफुट्ने सन्देश समेत प्रवाह गरेका छन् ।
Prevयी तिन जना झापालीले गरे यस्तो काम , पैसा कमाउने उनीहरुको आइडिया देखेर प्रहरी नै पर्यो चकित !
Nextश्रीमान श्रीमतीले झ गडा गरिरहेको ठाउमा मिलाउन खोज्दा जादा ….
भाग्य न्यौपानेको घर पुग्दा बुबाको कुराले सबैको मन रोयो,चोर हुन्छ भन्थे भन्दै भक्कानिए बुबा’ (भिडियो सहित)